Izinhlekelele zemvelo ezibhubhisa kunazo zonke emlandweni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe seSiphepho uKatrina, saqoshwa ngo-2005
Kwesinye isikhathi imvelo isitshengisa wonke amandla ayo, wonke amandla ayo. Kuyinto eyingxenye yale planethi, ngakho-ke, Akukho okunye esingakwenza ngaphandle kokufunda ukuhlala nakho.
Kodwa-ke, phakathi namakhulu eminyaka kube nezigameko ezingasimangazanga nje kuphela, kodwa nezibeka engcupheni izigidi zabantu. Namuhla sizokhumbula i- izinhlekelele zemvelo ezibhubhisa kakhulu emlandweni.
Ukuzamazama komhlaba ne-tsunami eLisbon (ePortugal)
Sivame ukucabanga, ngaphandle kwesizathu, ukuthi eNhlonhlweni yase-Iberia abukho ubungozi bokuzamazama komhlaba noma izehlakalo ezinzima zezulu. Kepha ngoNovemba 1, 1755 kwaba nokuzamazama komhlaba nakho okwadala igagasi lamaza, okwadala ukufa kwe cishe abantu abayizinkulungwane eziyikhulu.
ISiphepho uGilberto eMexico
Iziphepho, ezibonakala kuma-satellite noma ama-radar, zizinhle kakhulu, kepha iqiniso ukuthi kufanele zihlonishwe futhi kuthathwe izinyathelo ezilandelanayo ukugwema ingozi. Kodwa ngisho ngokuqapha, amashwa ayenzeka kwesinye isikhathi, njengangoSepthemba 1988. Kubange inani Ukufa okungama-318.
Ukuzamazama komhlaba nama-tsunami eValdivia (eChile)
NgoMeyi 22, 1960 edolobheni laseChile iValdivia kwabhaliswa ukuzamazama komhlaba okunamandla angama-9 degrees Richter, okwadala ama-tsunami amaningana. Mayelana Abantu abayizinkulungwane ezingama-2 Balahlekelwe izimpilo zabo.
IHaiti ngemuva kwetsunami yango-2010
Isiphepho uKatrina e-USA
Ingesinye seziphepho ezibhubhisa kakhulu emlandweni wakamuva. Isuke eSouth Florida yaya eTexas, ishiya ukulahleka kwezinto eziningi. Uthathe impilo kusuka Abantu abayizinkulungwane ezingama-2, okudala inani eliphezulu kakhulu lokufa kwabantu eNew Orleans.
Ukuqhuma kweKrakatoa, kanye nama-tsunami alandelayo e-Indonesia
Ukuqhuma kwentaba-mlilo kudala umbono ongakholeki, kepha futhi kungashiya izisulu, njengoba kwenzeka ngo-Agasti 26, 1883 e-Indonesia. IKrakatoa iqhume ngendlela eqhuma kangangoba izwakale endaweni engamakhilomitha angaphezu kuka-3 40 kude. Njengokungathi lokho kwakunganele, ngemuva kokuqubuka kwakheka uchungechunge lwamagagasi afinyelela ebangeni elicishe libe ngamamitha angama-XNUMX. Balahlekelwe izimpilo zabo ngaphezu kwabantu abayizinkulungwane eziyishumi.
Njengoba sibona, izinhlekelele zemvelo ezidala umonakalo zibamba isikhathi, kodwa kufanele uqaphele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izinhlekelele zemvelo ezibhubhisa kunazo zonke emlandweni